Ntugharị Weebụ 2017 na Ahụmahụ Ahụmahụ Ndị Ọrụ | Martech Zone
Anyị nwere ọ enjoyụ na nhazi anyị gara aga na Martech mana anyị maara na ọ dịla agadi. Mgbe ọ na-arụ ọrụ, ọ nweghị ndị ọbịa ọhụụ ka ọ na-emebu. Ekwenyere m na ndị mmadụ rutere saịtị ahụ, chere na ọ dị ntakịrị n'azụ ya - ha wee chee na ọdịnaya ahụ nwekwara ike ịbụ. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, anyị nwere otu nwa ojoo. Anyị hụrụ nwa ahụ n'anya, anyị rụsiri ọrụ ike na nwa ahụ, anyị nwere obi ụtọ na nwa anyị… mana ọ jọgburu onwe ya.
Iji kwalite saịtị ahụ, anyị mere ọtụtụ nyocha nke saịtị bipụtara na-ejide òkè ahịa. Anyị hụrụ nlegharị anya ha, nhazi ha, mkpụrụ edemede ha, ngagharị ha na-anabata maka mkpanaka ha, ojiji nke ndị na-ajụ ndị ọzọ, mgbasa ozi ha, na ndị ọzọ. Anyị chọkwara saịtị ebe anyị nwere ike itinye ọtụtụ atụmatụ na arụmọrụ anyị napụrụ na mbụ na plugins ma rụọ ọrụ iji hụ na ha bụ isi isiokwu ọrụ. Nke a ga - enyere saịtị ahụ aka imeziwanye ma belata ohere maka esemokwu ma ọ bụ enweghị nkwekọrịta ndị ọzọ.
Ọ na-arụ ọrụ. Ebe nrụọrụ anyị okporo ụzọ dị elu 30.91% maka otu oge ahụ n'afọ gara aga. Eledala uru nke ahụmịhe ndị ọrụ gị na mmetụta ya na nnweta na njigide.
Ọ bụrụ na oge eruola ka ị nyefee saịtị gị ọzọ… enwere ọtụtụ ohere iji nyere gị aka melite ahụmịhe onye ọrụ (UX) maka ndị ọbịa gị. Ọgwụgwụ miri emi tinye a infographic na ụfọdụ echiche na ebe ị nwere ike ịchọ ụfọdụ imewe n'ike mmụọ nsọ.
Kwa afọ na-ewetara anyị ụdị ọhụụ ọhụụ anyị nwere ike ịtụ anya ịhụ ịpụta na weebụsaịtị. Mana ịbụ ụlọ ọrụ na-adabaghị na ụgbọ ala ahụ, anyị chọrọ ụzọ iri kachasị mma maka atụmatụ weebụ yana njirimara nke onye ọrụ nke 2017 nwere ike iji mee ka mgbanwe dị mma na weebụsaịtị ọ bụla. Nke ahụ bụ karịa ndị ahịa, ndị ahịa ma ọ bụ na-eduga n'akpa gị, nke bụ ụzọ dị mma iji gbanye Afọ Ọhụrụ.
Ejiji Web na UX / UI Trends
Imewe Afọ Na-anabata - ndị otu ọgbọ dị iche iche ga-emeghachi iche na ọdịnaya dị iche iche, nhazi na nhọrọ mara mma.
Skeleton reenskwà - itinye peeji na nkebi, site na mfe ruo na mgbagwoju ka ndị ahịa wee nwee ike ịtụ anya ihe ọdịnaya na-abịa.
Njikọ aka Bots - soro ndị ọrụ soro nwee ahụmịhe ndị ahịa na ndị ọgbọ n'ọdịmma na-enweghị site na AI nkata bots.
Cartzụ ahịa Cartzụ ahịa - na-enye onyinye, onyinye na-eweta ọnụ, na ire ahịa n'oge ọpụpụ iji mepụta ego ọzọ.
Bọtịnụ Na-eme Omume Animated - jiri animations dị mfe ma dị mfe iji kpọọ uche gaa na bọtịnụ gị maka ịpịkwu-pịa.
Cinemagraph dike Images - akụkụ foto, vidiyo vidiyo, cinemagraphs anaghị eji ya eme ihe mana ọ na-akpali ọtụtụ mmasị.
Nkọwa Videos na-emegide mmadụ - jiri ezigbo ndị dị ka akaebe ndị ahịa na ngosipụta ngwaahịa iji merie mmegide ma mechie ire ere ahụ.
Uru-Dabere Exit overlays - jiri ikike ịpụpụ kama iwe iwe mgbe mmadụ ga-ahapụ saịtị gị.
Ọnwụ nke Homepage - akparamagwa na ihu igwe na-edina ihe ga-aka eleba anya na onodu mmadu di iche iche.
Scroll Trumps Igodo - ihe dị mkpa karịa idebe ọdịnaya na elu nke ọtụtụ peeji nke na-agwa akụkọ na-akpali akpali na otu ibe.
Tags: 2016nhazi usorouiUi imeweahụmahụ onye ọrụonye ọrụ interfaceuxux imewe